September 3, 2020 September 3, 2020 adminLeaveaComment on ध,र्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पा प गरेर घर फर्कियो!- रवि लामिछाने (भिडियो)
काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकमा भएको रातो मत्स्ये,न्द्रनाथको रथ यात्रा तान्न निस्किएका युवाहरुको समुहले ड्यु,टीमा ख,टिएका एक जना ट्रा,फिक प्र,हरी ज,वानमाथि निʼर्घात कुʼट पिट गरेका छन् ।
को,रोनाका कारण जा,री निषेधाज्ञा उल्लं,घन गर्दै रथ जात्रा गर्न थालेपछि स्थानीय र प्र,हरीबीच झʼडप भएको थियो । प्रह,रीले रथ तान्न रोकेपछि युवाहरूले विʼरोध गर्दा झʼडप भएको थियो । सोही क्रʼममा ड्यूʼटीमा खटिए,का ज,वान कमलप्रसाद घिमिरेमाथि कुʼटपिʼट भएको हो ।
कार्यक्षेत्रमा रहेका ट्राफिक प्र,हरीका ज,वानलाई केही युवाले निर्घाʼट कुʼटपिʼट गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जा,लमा सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक भिडियोमा ड्युटीमा एक्लै रहेका ट्रा,फिक प्र,हरीलाई युवाहरूको समूहले कुʼटपिʼट गरेको देखिन्छ ।
युवाको कुट पि,टपछि ती प्र हरीमा भुइँमा लड्छन् । एक जना युवाले त्यहाँबाट ब,चाउँदै प्र रीहलाई अर्को स्थानमा ल्याउँछन् । तर भाग्दै गरेको प्र,हरीलाई पिछा गर्दै अन्य युवाहरूले कुʼटपिʼट गर्न छोड्दैनन् । ती प्र,हरी भाग्दै भा ग्दै अन्ततः ड्युटीमा रहेका प्र,हरीको सम्पर्कमा पुग्छन् र प्र हरीले उनको उʼद्दार गरेर लगेको देखिएको छ ।
प्र,हरीमाथि कुʼटपिʼट गर्नेको खो जी भइरहेको महानगरीय ट्राफिक प्र,हरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भिमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । म,हामा रीका वेला पनि काममा खटि,एका वेला कुʼटिएपछि प्र हरी अधिकारीहरुको म,नोबल गिरेको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरुले चिʼन्ता व्य,क्त गरेका छन् । म,हामारीवि,रुद्धको प्रतिका,र्यमा खटि एका सु रक्षाक र्मी र स्वास्थ्यकर्मीमाथि पटकपटक दुव्र्यʼहार हुने गरेको छ ।
यसैबिच सामाजिक सञ्जा,लमा कु,टपिट गरिएको भिडियो भाइ,रल भयपछी पत्रकार रवि लामिछानेले यस्को घो,र वि,रोध गर्दै उत्त भि,डियो से,यर गर्दै लेख्छन्:
धर्म गर्न घरबाट निस्केको मान्छे पा,प गरेर घर फर्कियो!यस्तो म,हामा,रीमा बिना कुनै अति,रिक्त सु,बिधा, जनताको सेवामा खटि,एको राष्ट्रसे,वक प्र,हरीमाथी कसरी हात लात उठ्छ होला? छि…. कति सम्म गिरेको होला मान्छे। प्र,हरीले कतै यस्तै गरेको तर भिडियोमा नदेखिएको भएपनि यस्ता कुक,र्मको बराबर भत्स,र्ना गर्दछु। source apnepal
अर्थमन्त्री खतिवडालाई राज्यद्रो,हको मु,द्दा लाग्नसक्छ: भीम रावल